Iningi lethu livame ukuba nomuzi isihlahla imali. Feng Shui (imfundiso Eastern mayelana ekhaya ngcono) ukholelwa ukuthi ukuba khona lesi sitshalo kusiza ekwehliseni imicabango esindayo njalo mayelana nemali. Ngakho-ke, le mbali Kunconywa ezezimali ochwepheshe, ezimali bonke labo kumele njalo sisebenze kwemali. Lo mbono ngokuthi lesi sithombo singakhiqiza ngokwako baletha ekhaya izimali abambalwa bengase, kungcono nje imbali. Uma ungenzi lutho, ingcebo uqobo aliveli. Kodwa labo abasebenza kakhulu, kodwa inhlanhla akezi, uhlobo oluthile Jade kungasiza ukuba unqobe lo "black" band.
Indlela yokutshala imali isihlahla feng shui? Ukuze wenze lokhu, ke okokuqala, kudingeka akhethe okuhle. Akuwona wonke isitshalo obukhulu sifanamsindvo futhi "chubby" eshiya Crassula is nohlobo. Ukuze ususe ukucindezeleka zezimali imbali ofanele kuphela, okuyinto ngaphansi uphawu Capricorn - Crassula esiliva, ogama amaqabunga esitolo amanzi kahle, futhi ngempela zifane encane "imali." Ukuze imbali ngangokunokwenzeka ukuze uxhumane ekhaya nabantu babheka kuye ukuze bathole usizo, kungcono ukuba sikhule bebodwa, kusuka ishidi olulodwa, washaya phansi ngoba cactus ne amanzi okuhle. Olwandulelayo kubalulekile kancane ezomile amahora ambalwa.
Indlela kabusha isihlahla imali ukuthi nguye obangele ukuchuma ngokwezinto ezibonakalayo? Kukholakala ukuthi yisithombo asekhulile kufanele ashukumiseleke ebhodweni oyi-sisekelwe kuye uhlamvu. Njengoba ukukhula imbali kudingeka sithathe enkulu, enhle futhi ijulile esanele ngoba engxenyeni engenhla Jade sinzima futhi ongazigenula phezu ebhodweni engajulile. isitsha Beautiful kulokhu ayeyoba uphawu lwenhlonipho ukuthi ubonisa imbali esenana usizo lwakhe ngokuxazulula izinkinga yezinto zezimali.
Ukuze Crassula akusho ubuhlungu futhi athuthukiswe kahle, kubalulekile ukwazi ukuthi ukufakela isihlahla imali njengengxenye izenzakalo yonyaka ukuze amnakekele. Kudluliswa "ekhaya" entsha ukwenza kangcono entwasahlobo, lapho imbali ongenza ivuka kulokhu kulala kwasebusika. Kusukela ngo-September kuya ku-March, kuyadingeka ukugcina cool (mayelana 10 degrees) futhi kuyaqabukela bazithela ngezikhathi bahlanza ngaphandle ukukhohlwa amahlamvu lapho uthuli eqoqiwe. Ehlobo "umsizi oluhlaza" yakho ezidinga Ukufiphaza ekukhanyeni, umdolofiya uhlobo umquba, ngenkasa akuyona ezingaphezu kuka kabili ngesonto futhi semali umoya ohlanzekile ezingeni lokushisa mayelana 20 degrees Celsius.
Indlela kabusha isihlahla imali endaweni eyodwa egumbini kuya komunye, ukuze isitshalo kungcono "umsebenzi"? Indawo enhle kuyinto esiliva Jade enyakatho noma endaweni eningizimu-mpumalanga yesifundazwe ikamelo, ehhovisi, lapho kuzokhulisa kahle futhi usize ekuxazululeni izinkinga. Kuyinto okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo yokudlulisa isihlahla imali uNcibijane eduze nesihlahla sikaKhisimusi kanye zokuhlobisa it ne chocolate zemali, elenga kudabuke obomvu noma ophuzi.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela kabusha isihlahla imali ngokufanele. Mhlawumbe wonke ngeqoqo lezinyathelo kuzoholela yokuthi lesi sitshalo ngeke eziqhakaza wena (okwenzeka kakhulu akuvamile). Lokhu kubonisa ukuthi zinakekelwa kahle ngakho emva kwakhe, ukuthi usukulungele alethe kuwe inhlanhla esiphezulu sezimali. Ngakho funda legends nasekukholelweni ezeni. Noma kunjalo, indima eyinhloko ekufezeni izinga elithile inhlalakahle alinikwa ukuze imibala, futhi abantu ngokwabo.
Amahostela Good e Moscow, ukukala, incazelo, indawo
Ama-roller phezu izicathulo, hhayi kuphela imfashini, kodwa futhi ukhululekile
Temperature Inzwa: Action isimiso futhi ububanzi